6 Isbeddellada Tikniyoolajiyadda ee 2020 Suuq Kasta Waa Inuu Wax Ka Ogaadaa | Martech Zone
Wax qarsoodi ah maaha in isbeddelada suuqgeynta ay la soo baxaan isbeddello iyo hal-abuurnimo tikniyoolajiyad ah. Haddii aad rabto in meheraddaadu istaagto, keento macaamiil cusub oo aad ku kordhiso muuqaalka khadka tooska ah, waxaad u baahan doontaa inaad firfircooni ka muujiso isbeddelada tiknoolajiyada.
Ka fikir isbedelada tiknoolajiyada laba siyaabood (iyo maskaxdaada ayaa ka dhigi doonta farqiga u dhexeeya ololeyaasha guuleysta iyo xamaamyada falanqayntaada):
Ama qaado tillaabooyin si aad u barato isbeddellada oo aad u adeegsato, ama looga tago.
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa lix isbeddello teknolojiyad casri ah oo ku saabsan hiigsiga sannadka 2020. Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Waa kuwan xeeladaha iyo qalabka aad u baahan tahay si aad u garaacdo dhulka socda sannadkan.
Isbedellada 1: Suuqgeynta 'Omnichannel' Ikhtiyaar Ma Sii Dheertahay, Waa Loo Baahan Yahay
Illaa iyo hadda, suuqleyda waxay ku guuleysteen inay diiradda saaraan dhowr wadiiqadood oo bulsheed oo ay ku dhajiyaan oo ay ku lug yeeshaan. Nasiib darrose, arrintani hadda ma sii jirto sannadka 2020. Suuqgeeye ganacsi ahaan, ma haysatid wakhti aad ugu dirto waxyaabaha ku jira barxad kasta. Halkii aad u abuuri lahayd waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay kanaal kasta, waad awoodi kartaa dib u soo celi mawduuca oo ku dheji kanaal kasta. Tani kaliya ma xoojin doonto farriintaada astaanta ah, laakiin waxay ka dhigeysaa ganacsigaaga mid ku habboon oo lala macaamilayo bulshadaada internetka.
Suuqgeynta Omnichannel waxay u suurta gelineysaa dhagaystayaashaada wadajirka ah inay booqdaan kanaalladaada si habsami leh. Natiijada?
Iibinta kanaalka-iskutallaabtu waa qiimahoodu qiyaastii $ 2 tiriliyan.
Diyaar ma u tahay inaad aragto suuqgeynta omnichannel ficil ahaan? Fiiri sida tafaariiqleyda ugu weyn ee Mareykanka, Nordstrom, wuxuu hirgeliyaa suuqgeynta kanaalka:
Nordstrom Pinterest, Instagram, Iyo Facebook xisaabaadka dhammaantood waxay ka kooban yihiin qoraallo alaab la riixi karo iyo dhiirigelin qaab ah.
Markay dadku daalacdaan mid kamid ah xisaabaadka warbaahinta bulshada ee Nordstrom, waxay dukaamaysan karaan qoraalada u horseedaya websaydhka Nordstrom.
Markii ay yimaadaan goobta, waxay jadwal u sameyn karaan ballan qaabeyn ah, soo dejiso barnaamijka Nordstrom, iyo inay marin u helaan barnaamijka abaalmarinta daacadnimada.
Suuqgeynta 'Omnichannel' ayaa macmiilka dhex dhigeysa wareegga dareeraha maadada, adeegga macaamiisha, iibka, iyo abaalmarinta.
Farriinta waa mid cod dheer oo cad:
Sanadka 2020, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto suuqgeynta omnichannel. Sare u kaca suuqgeynta dhijitaalka ah iyo warbaahinta bulshada ayaa abuuray baahida loo qabo qalab daabicis otomaatig ah. Si saraaxad leh, milkiileyaasha ganacsiyada iyo suuqleyda si fudud uma haystaan ​​wakhti ay maalin walba ugu dhajiyaan dhowr aagag.
Gali: Abuurista waxyaabaha, dib u habeynta iyo daabacaadda qalabka PosterMyWall. Kaliya ma abuuri kartid waxyaabo, laakiin waxaad ku cabbiri kartaa cabbirro kala duwan sida qoraallada Instagram ama Facebook sawirada la wadaago. Gunno? Waa lacag la’aan. Laakiin kuma filna inaad abuurto uun, waxaad rabtaa inaad sidoo kale daabacdo.
Si aad waqti u badbaadiso, isku dubaridid ​​abuuristaada iyo daabacaadda howlaha wadajira. Hal fadhi, waxaad abuuri kartaa waxyaabo muuqaal ah oo soo jiidasho leh oo aad jadwal u sameysaa si aad otomaatig ugu daabacdo kanaal kasta. Adiga oo isku shaandheyn ku sameeya nashqadaha socdaalka iyo ku-daabacida waxyaabaha hal-ku-riix fudud, waxaad badbaadinaysaa waqti, lacag oo sumcaddaada ayaa ku habboon.
Suuqgeynta Omnichannel waxay u dhigantaa omnipresence khadka tooska ah, taasina waa isbeddel xagga farsamada 2020 ah oo aadan iska indhatiri karin
Taxana 2: Mustaqbalka Suuqgeynta Fiidiyowga
Suuqgeynta fiidiyowgu waa erey-bixinno waayahan dambe, laakiin ma u qalantaa dhammaan buunbuuninta? Iyadoo la tixgelinayo in dad ka badan kala badh ay khadka tooska ah ka daawadaan fiidyowyada maalin kasta, sida ku cad tirakoobka suuq geynta fiidiyowga HubSpot, Waxaan dhihi lahaa waa soojiidasho haa. Noocee ah ayay dadku daawanayaan? Youtube ma sii xukumayo sida xayeysiinta fiidiyowga ee Facebook, Sheekooyinka Instagram iyo Live-ka ayaa caan ku ah
The fure u ah suuqgeynta fiidiyowga ee wax ku oolka ah waa shaqsiyeyn. Dadku ma xiiseeyaan inay daawadaan fiidiyowyo aad u dhalaalaya, daaweyn dambe. Taabadalkeed, waxay jecelyihiin waxyaalaha fiidiyowga ah ee kahadlaya danahooda shaqsiyadeed. Fiidiyowyo cufan waa hab fiican oo lagula xiriiri karo dhagaystayaashaada oo aad ula wadaagi karto dhinac dhow saaxiibadaada.
Ha walwelina, uma baahnid xirfad-yaqaan sawir-qaade ah si aad u abuurto waxyaabo fiidiyoow ah oo soo jiidasho leh. Waxaad si fudud ugu farsamaysan kartaa fiidiyowyo ku habboon oo ku soo jiidan kara xoqida, ama ka tusaalooyinka fiidiyowga ee PosterMyWall. Abuur fiidiyowyo si aad u qaabeysid farriintaada astaanta ah, u dhiirrigeliso soo-saar shey ama u sheeg dhagaystayaashaada ku saabsan wararka shirkadda.
Waa tan Sida Fudud ee PosterMyWall uu yahay:
Ka eeg fiidiyowga fiidiyowga si aad u hesho mid ku habboon codka iyo farriinta astaantaada
Guji nashqadaynta si aad u habeysid tusaalaha
U adeegso tifaftiraha si aad si fudud ugu habayn karto nuqulka, midabada, noocyada iyo qaabeynta
Si toos ah ula wadaag fiidiyowga marinnadaada bulsheed ee 'PosterMyWall'
Kaliya afar talaabo oo fudud, waxaad heysataa fiidiyoow sumad leh oo aad wadaagto! Iyadoo kooban, kaqeybgal ah fiidiyowga, waxaad naftaada ku haysaa safka hore ee dareenka dhagaystayaashaada, taasina waa meel fiican oo lagu noqon karo.
Isbedelka 3: Samee Alaabooyinka Laga Heli Karo Suuqa Google
Isbadal cusub oo dhanka tiknoolajiyada ah ayaa mowduuc badan ka noqday suuqleyda: ku riixida alaabada Suuqa Google. Mucaaradku waxay ku doodayaan inay maal gashadeen tiro aad u tiro badan si ay u dhisaan degel soo jiidasho leh oo ka tarjumaya sumcadda iyo aqoonsiga ganacsigooda. Ku riixida alaabada Google waxay ka saareysaa fursada martida inay layaabaan goobahooda si dhameystiran u baakadeysan. Natiijada? Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid taraafikada webka.
Waa inaad fiirisaa wixii ka hooseeya halbeeggan si aad u aragto sawirka weyn halkan. Ma rabtaa inaad wax iibiso? Mise waxaad rabtaa inaad yeelato degel si heer sare ah loo soo booqdo? Dabcan, waxaad dooneysaa iib, laakiin ma ahan iibin hal mar ah, waxaad dooneysaa soo noqnoqosho, macaamiil daacad ah, waana sababta aad u abuurtay websaydhka qurxoon, sax? Xaq
Halkii laga tixgelin lahaa Suuqa Google sida dhimashada websaydhkaaga, uga fikir inay tahay kanaal kale si aad ugu keento wacyigelinta sumaddaada. Inkasta oo noocyada kale ay ka faaruqinayaan rajada ah in alaabada lagu riixo Google isla markaana lumiyo taraafikada, waad ku boodi kartaa oo aad liis garayn kartaa alaabtaada, iibso iibsan kartaa, oo kobcin kartaa sumaddaada.
Xaqiiqda inaad qori kartid badeecadaada si aad ugu iibiso Google daqiiqado gudahood ayaa ka dhigaysa aalad suuqgeyn fudud (iyo bilaash ah) oo aadan awoodin inaad iska indhatirto.
Halkan waa sida aad u sameyn karto:
Marka hore, madaxaaga Koontada Google My Business, meesha aad ku qori kartid alaabadaada, faahfaahinta alaabta, ku dar sawirada oo aad bilaabi karto iibinta daqiiqado gudahood. Dabcan, waxaad ubaahantahay inaad xoojiso codkaaga astaanta ah, fariimahaaga iyo sumadeynta websaydhkaaga iyo kanaalada warbaahinta bulshada. Micnaha, ma doonaysid inaad tuurtid hodgepodge liisaska waxsoosaarka qasan kor. Ula dhaqan Suuqyada Google si la mid ah sida aad u ilaalin lahayd dukaankaaga internetka oo aad fikirka u geliso sawirrada, nuqul iyo sharaxaadaha alaabta.
Isbedellada 4aad: SERPS Nidaamaynta Nidaamyada Nidaamyada iyo Goobaha Qaniga ah
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa ah mid aan la dafiri karin oo ku tiirsan SEO (Raadinta Mashiinka Raadinta). Sanadka 2020, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso wax kabadan xulashada keywords keyword iyo isticmaal qoraalka alt qoraalka si aad uhesho taraafikada webka. Haa, weli waxaad u baahan tahay inaad adeegsato hababka ugu fiican ee SEO, laakiin hadda waa inaad tallaabo dheeraad ah qaaddaa oo aad abuurtaa goos goosyo hodan ah oo leh Qorshaha Markups.
Qayb yar oo hodan ah ayaa ka kooban microdata, oo loo yaqaan 'Schema markup', oo si cad ugu sheegta makiinadaha raadinta waxa bog kasta oo webku ku saabsan yahay. Tusaale ahaan, markaad gasho “kafee sameeyaha” baarka raadinta Google, midkee natiijooyinkan ayaad u malaynaysaa inay dadku u badan tahay inay gujiyaan:
Sharaxaad shey cad, qiimaha, qiimeynta macaamiisha, iyo dib u eegis
Faahfaahin meta oo aan caddayn ayaa si aan kala sooc lahayn uga soo jiiday bogga, qiimeyn la'aan, qiime la'aan, macluumaad la'aan
Haddii aad qiyaastay ikhtiyaarka koowaad, waad saxantahay. Sanadka 2020, dhamaan matoorada waaweyn ee raadinta, oo ay kujiraan Google iyo Yahoo !, waxay aqoonsadaan astaamaha istiraatiijiyada iyo jeexjeexyada hodanka ah markii la jiidayo SERPyada (Bogagga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta).
Maxaad qaban kartaa? Waxaad haysataa laba ikhtiyaar: isticmaal Schema.org si loo abuuro jajabka hodanka ah, ama ka faa'iideysta qalabkan bilaashka ah ee Google. Hadda, mid kasta oo ka mid ah bogagga wax soo saarkaaga waxaa ka buuxa macluumaad la xiriira, taas oo kordhinaysa muuqaalka ganacsigaaga.
Jaanqaadka 5aad: AI wuxuu fududeyn doonaa Hyper-shaqsiyeynta
Ku dhawaaqa sida oxymoron? Si ahaan, waa, laakiin taasi ma dhimeyso ku-habboonaanta. Markii aan ka wada hadalno shaqsiyaynta shaqsiyadeed ee suuqgeynta, waxaan baareynaa siyaabo aan macaamiil ugu siinno khibrad shaqsiyeed.
Aan cadeeyo: AI maahan inay bani aadamnimada sumcad ka baxdo marka si sax ah loo isticmaalo. Taabadalkeed, waxay kaa caawin doontaa abuuritaanka khibrad adeeg macmiil oo shaqsiyeed oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha ayaa ka daalay warbaahinta aan shakhsiyan ahayn. Markaad tixgeliso xaqiiqda ah in warbaahinta meel walba ku qulqulaysaa iyaga 5,000 oo xayeysiis maalintii, way fududahay in la arko sababta ay u daalan yihiin. Halkii aad ku dari lahayd sawaxanka, waxaad si farshaxanimo leh u shaqaalayn kartaa AI si aad uhesho khibrad shaqsiyeed.
Isbeddelada tikniyoolajiyadda iyo qulqulka barnaamijka softiweerka ah ee AI, suuqleydu waxay macaamiishooda uga heli karaan heer aad isugu dhow. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ugu adeegsan karto AI si aad shaqsiyan ugu hesho ayaa ah inaad ururiso xog ku saabsan waxyaabaha ay ka helaan.
Si taxaddar leh u baaro gorfaynta websaydhkaaga iyo aragtiyaha warbaahinta bulshada. Waa maxay qaababka soo baxa? Waxaad adkaysiisisay shakhsiyaad macaamiil ah si loo abuuro sumadayn iyo sawir lahadlaya iyaga. Weli, taasi si fudud kuma filna haddii aad rabto xiriir dhab ah oo macaamiisha la xiriira.
Taasi waa sababta noocyada waaweyn ay u adeegsanayaan AI maxaa yeelay with
Netflix waxay saadaalin kartaa waxa isticmaale kasta uu rabo inuu daawado iyadoo lagu saleynayo taariikhdooda.
Under Armor dawaarleyaasha nidaam caafimaad oo ku saleysan isticmaalayaasha cunista, hurdada iyo caadooyinka caafimaadka.
Chatbots waxay weyddiisan karaan booqdayaasha boggaaga magacaaga 'Facebook Page' haddii ay u baahan yihiin caawimaad helitaanka badeecad ama adeeg gaar ah.
Qeybta hoose: si aad ula macaamiisho macaamiishaada sannadka 2020, waxaad u baahan doontaa caawimaad yar oo ka timaadda AI.
Isbedelka 6aad: Codka Raadinta Ma Bedelayo Mawduuca Muuqaalka
Kordhinta raadinta codka waxay suuqleyda si aad ah ugu badashaa waxyaabaha la aqrin karo qaab cod ah matoorada raadinta. Raadinta codku waa isbeddel ku socda qof walba radar, waana mid sax ah:
Kala badh raadinta waxaa lagu sameyn doonaa cod raadin 2020.
Waxay u badan tahay inay tahay fikrad wanaagsan inaad diirada saarto dareenkaaga raadinta codka, laakiin markaad sidaas sameysid, ha ku khaldamin inaad ka fikirto in muuqaalka muuqaalka yahay rootiga maalinlaha ah. Xaqiiqdii, waa wax iska soo horjeedda. Ma u baahan tahay caddeyn? Waxaa loo yaqaan 'Instagram', waana ay leedahay 1 bilyan oo ah isticmaalayaasha firfircoon laga bilaabo Janaayo 2020.
Dadku si aan macquul aheyn waxay ujecelyihiin waxyaabaha muuqaalka leh. Maxay u diidi waayeen? Muuqaal ahaan, waxay:
Baro xirfado ama macluumaad la xiriira danahooda
Isku day cuntooyin cusub ama abuur farshaxanno iyo farshaxanno
Daawo fiidiyowyo madadaalo iyo macluumaad leh
Raadi noocyo iyo alaabooyin cusub
In kasta oo muhiimadda suuq-geynta muuqaalka aysan daruuri ahayn in la beddelo sannadka 2020, haddana imaatinka fikradaha hal-abuurka leh ayaa laga yaabaa inay suuqyadu ku tijaabiyaan inay abuuraan waxyaabo muuqaal ah. Tani waxay lama huraan noqon doontaa waxyeelo. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in lagu daro waxyaabo muuqaal ah oo muuqaal ah dhammaan xeeladahaaga fidinta.
Si laguu caawiyo, PosterMyWall waxaa si buuxda u buuxsamay muuqaal maktabadaha, tusaalooyinka fiidiyowga, iyo kumanaan qaab-hawleedyo xirfadaysan loo qaabeeyey. Qalabkan softiweerka ah ee bilaashka ah, waxaad ku habeyn kartaa arrimo adoo beddelaya qoraallada, midabada iyo sawirada si aad ula mid noqoto magacaaga. Ama, waxaad ku farsameysan kartaa qoraallada warbaahinta bulshada, sawir-qaadashada baloogyada, sawirrada wax soo saarka ee la habeeyay iyo hantida dhiirrigelinta oo laga bilaabo xoq iyadoo la adeegsanayo softiweerka tafatirka oo si fudud loo isticmaalo.
Ha ilaawin inaad ku celiso muuqaalladaan si aad ugu xoqdo suuqgeyntaada omnichannel. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa cinwaanka boostada ee barta oo aad ugu beddeli kartaa pin Pinterest ama boostada Instagram iyo voila, waxaad haysataa waxyaabo muuqaal qurux badan oo muuqaal ah oo loogu talagalay kanaallo badan!
Isbeddelada Tech ka dhig kuwo adiga kuu shaqeeya
Sanadka 2020, waxaad u baahan doontaa inaad shabaq ballaadhan tuurto si aad u keento macaamiisha, aad u dhisto wacyigelin sumcad leh una kobciso ganacsigaaga. Si taas loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah inaad dabacsanaato oo aad ka horreyso isbeddellada. Furaha suuq-geynta waxyaabaha waa la qabsiga, maadaama suuqleyda ay u adkeysanayaan inay beddelaan halista suuqa oo la'aantood. Markasta oo aad furfurnaato oo aad ficil ahaan u tahay isbeddelada tiknoolajiyada, ayaa sida ugu fiican ee aad ugu isticmaali kartaa faa'iidadaada. Iyo goormaad samaynaysaa? Hagaag, wax kaa hor istaagayaa ma jiraan!
Tags: isbeddelada suuqgeyntaomnichannelisbeddellada tikniyoolajiyaddaisbeddellada
Christina Lyon waa qoraa, blogger iyo muusikiiste ka soo jeeda qoraxda SoCal. Waxay ku jirtaa dab si ay uga caawiso ganacsiyada internetka inay ku koraan nuqul suuq geyn ah. Markay ka durugto miiskeeda, Christina waxay jeceshahay akhrinta mala-awaalka, socodka xeebta iyo muusigga.